सौरभ ज्योती बने नेपालमै बनेको मोटरसाइकलको पहिलो ग्राहक ! – Life Nepali
सौरभ ज्योती बने नेपालमै बनेको मोटरसाइकलको पहिलो ग्राहक !
काठमाडौं। सौरभ ज्योतीले नेपालमै बनेको पहिलो इलेक्ट्रिक मोटरसाइकल ‘यात्री’ बुकिङ गरेका छन्। बिहीबार यात्री मोटरसाइकल सार्वजनिक कार्यक्रममा पुगेका ज्योतीले ‘यात्री’ मोटरसाइकलको पहिलो उत्पादन खरिद गर्ने घोषणा गरेका हुन्। यद्यपी यस मोटरसाइकलको मूल्य कम्पनीले सार्वजनिक गरेको छैन। ‘नेपाली युवाहरु प्रविधिमा अगाडि बढ्नु ठुलो कुरा हो।
त्यसकारण मूल्य थाहा नभएपनि खरिद गरेको हुँ,’ ज्योतीले भने। सौरभ ज्योतीको बुकिङले आफूहरूको हौसला झनै बढेको कम्पनीका संस्थापक अशिम पाण्डेले बताए। ४ जना इन्जिनियर सहितको ७ जनाको नेपाली युवा टोलीले बनाएको मोटरसाइकलको बिहिबार सार्वजनिक गरेका हुन्। कम्पनीले उत्पादन गरेको मोटरसाइकलले पावरको हिसावले केटीएम ड्यूक ३९०, रोयल इन्फिल्डलगायत मोटरसाइकललाई जित्ने छ । यसका डिजाइनर तथा यात्रीका प्रमुख असिम पाण्डेका अनुसार यसमा लागेका हरेक पाटर्स प्रिमियम छन् भने यसको मुख्य आकर्षण डिजाइन र प्रिमियमनेस हो ।
हाइटेक इन्जिनियरिङ्ग रहेको ‘पी–०’ मोटरसाइकलको मूल्यभन्दा यसको उत्कृष्टता ठूलो विषय रहेको पाण्डेको दाबी छ । यसमा ३० किलोवाटको मोटर प्रयोग गरिएको छ । यो अहिले बजारमा रहेका अन्य इलेक्ट्रीक मोटरसाइकलको तुलनामा यसको पावर अत्यन्त धेरै रहेको छ । ४२ बीएच पावर र १२० एनएम टर्क प्रदान गर्ने यो मोटरसाइकल एक पटकको फुल चार्जमा २३० किलोमिटर चलाउन सकिन्छ ।
Previous नेपालकै कम्पनीले मोटरसाइकल उत्पादन गर्दै !
Next सुनचाँदीको मूल्य तीन दिनदेखि स्थिर